အကောင်းဆုံးအိတ်ဆောင်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntables 2017-ဝယ်သူရဲ့လမ်းညွှန် - တရုတ် 10TURNTABLES
> အကောင်းဆုံးအိတ်ဆောင်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntables 2017-ဝယ်သူရဲ့လမ်းညွှန်
ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntables Specification နှိုင်းယှဉ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် Turntable မြန်နှုန်း နာယက auxiliary Input headphone Jack buttons
Crosley CR8005A-DS Cruiser3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
Crosley CR8005D-TW Cruiser Deluxe3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
Electrohome Archer ဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကိုဂန္ထဝင် Turntable (EANOS300)3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
Crosley CR6019A-BR အလုပ်အမှုဆောင် Turntable3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
1byone ခါးပတ်-Drive ကို 3-မြန်နှုန်းအိတ်ဆောင်စတီရီယို Turntable	3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
Victrola စပျစ်သီး 3-မြန်နှုန်းဘလူးတုသ်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntable3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
Jensen အိတ်ဆောင်စတီရီယို Turntable3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
ION အသံဗီနိုင်းကို Motion Deluxe | အိတ်ဆောင် 3-မြန်နှုန်းခါးပတ်-Drive ကိုခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntable3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
Musitrend ဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကိုဂန္ထဝင်အိတ်ဆောင်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
Tyler Bluetooth ကိုလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကိုဂန္ထဝင် Turntable3မြန်နှုန်း dynamic အပြည့်အဝ Range စတီရီယိုစပီကာ √ √ check စျေး
ယူနစ် (L ကိုက x W x ကို H ကို) = x ကို 14 x ကို 10.5 4.63
ယူနစ်အလေးချိန် (ပေါင်) = 5.5
, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့စျေးပေါ။ ဤရွေ့ကား Crosley ထုတ်လုပ် turntables ဖော်ပြသောစကားပေတည်း။ အမေရိကန်အနေဖြင့်လမ်းခရီးတရှောက်လုံး, သူတို့ကအများကြီး turntable ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အာရုံကိုဖမ်းပြီခြွင်းချက်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ turntable မြင်ကွင်းတစ်ခုပြန်လည်ပါဘူး။
အမြဲတမ်းမဆိုအခြားမကြိုက်ဘူးသော turntable လိုချင်? ဤသည် Crosley Cruiser turntable သီးသန့်ဒစ္စနေးအနုပညာလက်ရာများနှင့်အတူကြွလာနှင့်သင်မှတ်တမ်းများအမျိုးအစားအားလုံးကိုနားထောင်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းမှာဆော့ကစားနိုင်သည်။ မြတ်သည်မဟုတ်လော ဤသည် turntable ပုဂ္ဂလိကနားထောင်ခြင်းများအတွက် headphone jack နှင့်တကွကြွလာ။ တကယ်တော့တစ်ဦး auxillary port ကို turntable သို့ installed ဖြစ်ပါတယ်, ဒီသင်သည်သင်၏ preference ကိုအရသိရသည်သီချင်းတွေကိုရွေးချယ်ဖို့သင့်ရဲ့ဖုန်းများသုံးစွဲဖို့နိုင်ကြသည်ပင်ပိုကောင်းအဖြစ်သီချင်းနားထောင်စေသည်။
ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှခရီးဆောင်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ အရောင်များကိုတစ်ဦးခြောက်ချားရွေးချယ်မှုနှင့်အတူကပြင်ပမှာပေါ်အနီရောင်နှင့်အတွင်းပိုင်းအပေါ်အဝါရောင် coated ရဲ့။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ turntable သငျ့စိတျနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို captivate နိုင်ကြသည်ဖြစ်သောပြောင်းလဲနေသော Full-range ကိုစတီရီယိုစပီကာနှင့်တကွကြွလာ။ ဤသည် turntable $ 104,95 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအသံအတိုးအကျယ်ကို output အနည်းငယ်နိမ့်သည်။
Crosley မှအခြားမော်ဒယ်, ဒီအသံကုမ္ပဏီသူတို့တောက်ပ turntables အောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းနောက်တဖန်အချိန်နှင့်အချိန်သက်သေပြခဲ့သည်။ သင်ဂန္ဘက်ဆီသို့ဦးတည်ပိုပြီးင်တစ် turntable ရှာနေလြှငျ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အညိုရောင်အတွက် coated, ဒီမော်ဒယ်တစ်ဦးစပျစ်သီးကိုကြည့်ချွတ်ပေးရလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Crosley ရဲ့ turntables ဒီမော်ဒယ်တစ်ဦး NP6 အပ်လာပါတယ်။ သင်တစ်ဦး entry ကိုအဆငျ့ turntable ရှာနေလျှင်တရားခွင်နှင့်စမ်းသပ်ပြီး, ဒီဆေးထိုးအပ်မကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ turntable အားဖြင့်သင်တို့ကိုဘလူးတုသ်မှတဆင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ ဒါဟာသင်တတ်နိုင်သမျှအဆင်ပြေသင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုနားထောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သေချာ။ ထို့အပြင် turntable သင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတီးလုံးကိုနားထောင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ headphone jack နှင့်တကွကြွလာ။ ဤသည် turntable ဆိုစံချိန်များ၏ RPM ကိုထိန်းညှိဖို့နိုင်စွမ်းရှိပြီးဒါဟာသင့်ရဲ့ကြားနာမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအသံစွမ်းဆောင်ရည် delievers ကြောင်းပြောင်းလဲနေသောစတီရီယိုစပီကာနှင့်တကွကြွလာ။
volume ကို output ကိုအနည်းငယ်အနိမ့်ဖြစ်စေခြင်းငှါပေမယ့်, ဒီထုတ်ကုန်အားလုံးကိုအပြစ်တွေကျိန်းသေကတက်သည်စေသည်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မရှိဘဲအံ့သြဖွယ်ကစားသမားအပေါ်သံသယရှိသည်။ ဒါကမော်ဒယ် $ 74,48 မှာစျေးနှုန်းနှင့်ကျိန်းသေကရှိပါတယ် features တွေ၏ပမာဏတစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် bargain ဖြစ်ပါတယ်။
Volume ကို output ကိုနည်းနည်းလည်းအနိမ့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Electrohome Archer • 03ဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကို ဂန္ထဝင် Turntable (EANOS300)
UNIT COLOR: က Black
Finish: Black က texture PVC
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ: MDF ဝန်ကြီးအဖွဲ့ (အလတ်စားသိပ်သည်းဆ fiberboard)
မှတျတမျး Speed: 33, 45, 78
မှတျတမျး AUTO Return ကို ARM Adjustments: NA
45 adapter ပါဝင်သည်: ဟုတ်ကဲ့
AUTO Return: ဟုတ်ကဲ့
ရေဒီယို - FM ရေ: အဘယ်သူမျှမ
ရေဒီယို - လေး: အဘယ်သူမျှမ
CD ကို: အဘယ်သူမျှမ
USB မှတ်ပြသမှု: ဟုတ်ကဲ့
USB ကစွဲချက်: အဘယ်သူမျှမ
USB မှတ်စံချိန်: အဘယ်သူမျှမ
SD က slot: အဘယ်သူမျှမ
SD ကပြသမှု: အဘယ်သူမျှမ
SD ကမှတ်တမ်းများ: အဘယ်သူမျှမ
headphone jack: ဟုတ်ကဲ့
auxiliary ထည့်သွင်းမှု: ဟုတ်ကဲ့
Speaker SIZE: x ကို32 "5W 8Ohm
ပါဝါကို EPS: ပြင်ပ
ပါဝါအဒက်ထည့်သွင်းမှု: 120V - 240V (50/60 Hz)
ပါဝါစားသုံးမှု: 19 Watts
FREQUENCY ချက်အရ RANGE (AM): NA
FREQUENCY ချက်အရ RANGE (FM ရေ): NA
Dimension: 18.5 "x13.38" x5.9 "
UNIT အလေးချိန်: 13,82 ပေါင်
လက်မှတ်: ICES, FCC သည်လက်မှတ်ရ, ETL / CETL
WHAT ကိုထည့်သွင်းမယ့်: Archer ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntable , 45 စံချိန်တင် Adapter ကို, AC အဒပ်, ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ, 1 တစ်နှစ်တာအာမခံ, တစ်သက်တာဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု
Electrohome 100 ကျော်နှစ်ပေါင်းစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့တစ်သက်တာဖောက်သည်ထောက်ခံမှုရှိသည်အဖြစ်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် 3-in-1 ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ turntable ကြီးမြတ်စတိုင်နဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီးသင်တို့ကိုလည်းကြောင့်ကဘယ်လောက်ခရီးဆောင်ဖို့စိတ်တို့သည်ကြီးစွာသောငြိမ်းချမ်းရေးပေးသည်။
ဤသည် turntable 1960 ကနေမှုတ်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါ Electrohome Archer ဗီနိုင်း Record ကို Player ကို ဂန္ထဝင် Turntable သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် moblie device မှဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများနှင့်သင့်ကအရမ်းကိုယ်ပိုင်ဂီတကစားရန်တတ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်တစ်ဦး headphone jack ပုဂ္ဂလိကနားထောင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် turntable က built-in ကသင်၏နှလုံးကိုထိမိဖို့အကောင်းဆုံးအသံစွမ်းဆောင်ရည်ပို့ဆောင်၎င်း၏လေးရယ်အလားအလာရောက်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့အနေနဲ့အားလုံးသစ်သားဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူသျောဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကနီလာနှင့်တကွကြွလာမယ့်ပူနွေးနှင့်ပိုပြီးသဘာဝအ Vibe ပေးသောကြွေဆေးထိုးအပ်တင်ရန်။
အနက်ရောင် coated တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမယ့်ကြော့သည်နှင့်ကြောင်း retro စပျစ်သီးကိုကြည့်ပါတယ်။ ဒါဟာအနက်ရောင် PVC အတွက်ပြီးဆုံးပြီးပလပ်စတစ်လင်ပန်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် turntable အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာနောက်ဆုံးမှခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံး turntables လိုပဲအများစုဗီနိုင်းချောချောမွေ့မွေ့ကစားခံရဖို့တတ်နိုင်ကြသည်။ ဒါကမော်ဒယ် $ 49,91 မှာစျေးနှုန်းနှင့်ခိုးယူတစ်ဦးသည်ကြီးလှပေသည်။
အစားရှေ့များ၏နှစ်ဖက်ပေါ်မှာစပီကာ။ ထို့ကြောင့် multidirections အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အသံကပေးခြင်း။
ကသစ်ကိုဗီနိုင်းမှကြွလာသောအခါနည်းနည်း Skips ။
04 • Crosley CR6019A-BR အလုပ်အမှုဆောင် Turntable
Crosley မှအခြားခြွင်းချက်မော်ဒယ်, ဒီကိုအခြားမတူဘဲတစ်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ turntable ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Crosley CR6019A-BR အလုပ်အမှုဆောင်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းမှာဆော့ကစားနိုင်သည်။ ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်း device နှင့်သင့် Windows သို့မဟုတ် Mac အတွက်တစ်ဦးကို USB port ကိုကွန်ပျူတာထောက်ခံသော်လည်းသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုကစားရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ auxillary cable ကိုပါဝင်ပါသည်။
အဆိုပါခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာဟာ့ဒ်ဝဲချထားတဲ့ကြေးဝါနှင့်ပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်။ အညိုရောင်အတွက် coated, ကယ့်ကိုတကယ့်စပျစ်သီးကို Vibe ချွတ်ပေးသည်။ တကယ်တော့သူကခြွင်းချက်အရည်အသွေးပြောင်းလဲနေသော Full-range ကိုစတီရီယိုစပီကာနှင့်တကွကြွလာ။ အဆိုပါ turntable သို့ installed ကြောင်းအဆိုပါသေံလက်မောင်းကကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ထားသော်လည်း style အမျိုးမျိုးကြောင့်ယင်း၏ပုဒ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်သောအခါ, စံချိန်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်ကလစ်နှိပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။
သာ $ 81,52 မှာစျေးနှုန်း, ဒီမော်ဒယ်တိုင်းဒေါ်လာစျေးသုံးစွဲကျိုးနပ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသို့မဟုတ်မိသားစုများအတွက်စုံလင်သောဆုလက်ဆောင်ပါပဲ။ , အဆင်ပြေသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးအလွန်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ, ဒီမော်ဒယ်ကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
USB က function ကိုမှတဆင့် MP3 ဖိုင်မှဂီတမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့။
Volume ကို output ကိုအနည်းငယ်လည်းနိမ့်သည်။
05 • 1byone ခါးပတ်-Drive ကို 3-မြန်နှုန်းအိတ်ဆောင်စတီရီယို Turntable
ကိုယ့်အနေနဲ့အံ့သြဖွယ်ချောမွေ့ပြောင်လက်ဒီဇိုင်းရှိခြင်းမဟုတ်, ဒီ turntable သင်တစ်ဦး entry ကိုအဆငျ့ turntable ရှာနေမယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ဖြည့်တင်းဖို့အရာအားလုံးရှိပါတယ်။ တစ်ဦးတတ်နိုင်နှင့်ခရီးဆောင် turntable ရှာဖွေနေပါသလား သင်က 1byone ခါးပတ်-Drive ကို 3-မြန်နှုန်းအိတ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြေဆို စတီရီယို Turntable .
ဒါဟာသုံးကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းမှာမှတ်တမ်းများကစားရန်တတ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒါဟာသစ်သားဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူ PU သားရေနှင့်အတူပတ်ရစ်လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး style အမျိုးမျိုး turntable အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကြော့သေးပေါ့ပေါ့, ဒီမော်ဒယ်အလေးအနက်ထားမျက်စိဖမ်းမိကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အသေးစား andcompact, သင်သည်ဤဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အချိန်မရွေးသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအား, သင့်အာရုံကိုဖမ်းရန်ကချောမွေ့ပြောင်လက်သေးအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းပေးခြင်း။
ဤသည် turntable ပျော့ပျောင်းယုတ်လျော့စေသောယန္တရားနဲ့ပြောင်းလဲနေသောမျှမျှတတသေံလက်မောင်းပါရှိသည်။ ဤသည် turntable လည်းတစ်ခုတိုးတက်လာသောအသံအရည်အသွေးအဘို့အရှေ့ကမျက်နှာပြင်မှာစပီကာများပါဝင်ပါသည်။ တကယ်တော့သင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်ကောင်းစွာနားမထောငျဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ headphone jack နှင့်အတူပေးအပ်သည်။ ကသစ်ကိုဗီနိုင်းမှကြွလာသောအခါသူကနည်းနည်း skips Althought, ဒီမော်ဒယ်ရှိပါတယ်အပြစ်တွေ၏ပမာဏကတက်သည်စေသည်။ ဒါကမော်ဒယ် $ 59,99 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
06 •Victrola Vintage 3-Speed ဘလူးတုသ်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntable
ပြောင်လက်တောက်ပသော, ဒီကဗျာနှင့် eyecatching ။ အဆိုပါ Victrola စပျစ်သီး 3-မြန်နှုန်း ဘလူးတုသ်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ ကဂီတမှကြွလာသောအခါ Turntable features တွေများစွာသောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဤသည် turntable ဗီနိုင်း, auxillary ကေဘယ်လ်ကြိုးအားဖြင့်၎င်း, တစ်ဦးဘလူးတုသ် function ကိုတဆင့်ဖြစ်စေအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုစပီကာက built-in ပါရှိသည်။
အားလုံးသင့်ရဲ့အဆင်ပြေဖို့ဖြည့်တင်းရန်။ သင်တို့သည်နောက်ဗီနိုင်းသို့မဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်ဆို auxillary ကြိုးတွေရှိတယ်အခါဘလူးတုသ် function ကိုကြီးလှ၏။ သင်ကိရိယာမှချင်တယ်ဆိုဂီတ play handedly single နိုင်နေသကဲ့သို့ပင်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာပုဂ္ဂလိကနားထောင်ခြင်းများအတွက် headphone jack နှင့်တကွကြွလာ။
Victrola ထံမှမော်ဒယ်များတတ်နိုင်သမျှ retro ကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်, ချောမွေ့ပြောင်လက်ရဲ့ကတစ်ဦးအမေရိကန် Diner ၏လွမ်းဆွတ် Vibe ချွတ်ပေးသည်။ ဒီ model ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးနှင့်စျေးနှုန်းမစဉ်းစားပါကသင်တစ်ဦး turntable အဘို့သင့်ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုတွေထဲကရှာနေသင့်ပါတယ်လျှင်။ ဒါကမော်ဒယ် $ 57,15 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
စုံလင်သော stowaway အဖော်များနှင့်အလွန်ခရီးဆောင်ပါပဲ။
07 • Jensen အိတ်ဆောင်စတီရီယို Turntable
၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာရိုးရှင်းခြင်း, Jensen အိတ်ဆောင်စတီရီယို Turntable အများဆုံးဗီနိုင်းချောချောမွေ့မွေ့ကစားခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းမှာဆော့ကစားနိုင်မယ့်ခါးပတ်မောင်းနှင် turntable ဖြစ်ပါတယ်။ အနက်ရောင်ဒီဇိုင်း, တကယ့်ကြောင်းအဟောင်း retro ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Vibe ရှိပြီးတကယ့်လက်ရာမြောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုဒီ model ထွက်ရပ်ကဗီနိုင်းယင်း၏ပုဒ်ကစားလက်စသတ်ပြီးမှဒါဟာကိုပြန်သွားဖို့သေံလက်မောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တဲ့ယန္တရားမူရင်းအနေအထားင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြဖွယ်တစ်ခုကိုသည်မဟုတ်လော မှတပါး, ဒီ turntable အဆင်ပြေမှတ်တမ်းတင်တစ်ခုလုံးကိုအသစ်က Audacity ဆော့ဝဲနှင့်အတူကြွလာနှင့်သင့်အသံတည်းဖြတ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏အသံတည်းဖြတ်ရန်မည်သည့်အပိုဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုဝယ်ရန်မလိုအပ်လိမ့်မယ်။
တဦးတည်းသောကျောက်များနှင့်ငှက်နှစ်ကောင်နှိပ်။ ဒါဟာအစသင့်မိုဘိုင်း device ကိုအားဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ထားတဲ့ auxillary ဆိပ်ကမ်းကိုနှင့်အတူကြွလာနှင့်အပိုဆောင်းပီတစ်ခု RCA ဆိပ်ကမ်းကိုရှိပါတယ်။ တစ်ဦး 120V AC adapter အဖြစ်စိတ်မပူပါနဲ့ဖို့မအကောင်းဆုံးအသံက perfomance များအတွက်ပါဝင်သည်။ Additionaly ကြောင့်ကြီးမားသောအဖုံးအတွက်လာမယ့်အနေဖြင့်ဖုန်မှုန့်တားဆီးဖို့ကစားနေစဉ်ပိတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို၎င်း၏စျေးနှုန်းဆင်းနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမော်ဒယ် $ 94,95 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့ Multi-directional သံကိုပေးစေခြင်းငှါနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ် speakers ။
ION အသံဗီနိုင်းကို Motion Deluxe • 08 | အိတ်ဆောင် 3-မြန်နှုန်းခါးပတ်-Drive ကိုခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntable
သို့သျောလညျး ION အားဖြင့်အခြားမော်ဒယ်ကလူတန်းစားနှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသည်။ အဆိုပါ ION အသံဗီနိုင်းကို Motion Deluxe အကောင်းဆုံးကိုအသံအရည်အသွေးဘို့စပီကာအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်တဲ့ခရီးဆောင် 3-မြန်နှုန်းခါးပတ်-Drive ကိုခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ Turntable ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မည်သည့်အပိုဆောင်းပီသင့်ရဲ့ turntable ကို set up ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဆိုလိုသည်။ ကြောင်းစိတ်ကူးသည်မဟုတ်လော
ဒီ turntable ၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာဘက်ထရီခံစား၏နာရီကိုသေချာစေရန်အားပြန်သွင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် moblie device ကိုနှင့်ပုဂ္ဂလိက listeningrespectively ကနေသီချင်းဖွင့်ဖို့ auxillary ဆိပ်ကမ်းနှင့်တစ်ဦး headphone jack နှစ်ခုလုံးရှိပါတယ်။
ဤသည် turntable တစ်ခု entry ကိုအဆငျ့ကစားသမားရဖို့ရှာဖွေနေရဲ့သူမည်သူမဆိုအဘို့ကြီးစွာသောမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အဆင်ပြေသည်နှင့်အလွယ်တကူသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးခရီးဆောင်သေတ္တာကစားသမားတွေအကြောင်းအရေးအပါဆုံးအရာကမဖြစ်လား ဒါကမော်ဒယ် $ 37,67 မှာစျေးနှုန်းနှင့်သင်တဦးတည်းယနေ့ပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ရသင့်ပါတယ်။
ဂရိတ်အခြေခံ entry ကိုအဆငျ့ကစားသမား။
စပီကာတစ်ခုပြည်တွင်းရေးဘက်ထရီအားသွင်းတည်ဆောက်နဲ့အတူအသေးစားခရီးဆောင် turntable ။
09 •Musitrend Vinyl Record ကို Player ကို Classic Portable Suitcase
အဆိုပါ Musitrend ဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကိုဂန္ထဝင်အိတ်ဆောင်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ၏တံခါးသော့ကိုမှတ်တစ်ခုမှာသာ 5.8 ပေါင်အလေးချိန်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆင်ပြေထမ်းများအတွက်လွယ်ကူသောလက်ကိုင်နှင့်တကွကြွလာမယ့်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာတူသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာ Musitrend ဒီ model ဒါအလင်းဖြစ်စေနိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်အံ့သြစရာပါပဲ။
ဤသည် turntable မယုံနိုင်လောက်အောင်စွယ်စုံနှင့်သင့်မိုဘိုင်း device များအတွက်တစ်ဦး auxillary ဆိပ်ကမ်းကိုပုဂ္ဂလိကနားထောင်ခြင်းများအတွက် headphone jack များနှင့်အပိုဆောင်းပီတစ်ခု RCA ကို output နှင့်အတူကြွလာကြောင့်အသုံးပြုသူဖော်ရွေပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်လိုအပ်အင်္ဂါရပ်အားလုံးဤပုံစံသို့ထုပ်ပိုး။ သင်ဆဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်မရှိထပ်မံရှာဖွေပါ။
အသံအရည်အသွေးကိုကြောင့်ဒါဟာသစ်သားထဲကဆောက်လုပ်ထားသည်နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောကြော့ကြည့်ဘို့သားရေနှင့်အတူပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအမှန်တကယ်အံ့သြသည်။ အနီရောင်အတွင်းပိုင်း၏အနည်းငယ်ထိတွေ့နှင့်အတူ, ဧကန်အမှန်ခြွင်းချက်လှပါတယ်။ ကဗီနိုင်းတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်အမျိုးမျိုး3ကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းမှာဆော့ကစားနိုင်ကြောင်းကိုမေ့လျော့ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကမော်ဒယ် $ 59,99 မှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် MP3 ဖိုင်တွေဖန်တီးနိုင်အောင်ကို USB နှင့်တကွကြွလာ။
Tyler Bluetooth ကိုလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကိုဂန္ထဝင် Turntable • 10
သငျသညျအကြီးအကြည့်တို့နှင့်ကြီးသောအသံတစ် turntable ချင်လျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Tyler Bluetooth ကိုလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးဗီနိုင်းစံချိန်တင် Player ကိုဂန္ထဝင် Turntable installed တစ်ဦးက USB port ကိုမှတဆင့်ဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများနှင့်မိုဘိုင်း Device များကစားနိုင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာသင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှကစားဘို့အခြား option ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ auxillary input ကိုရှိပါတယ်။
ဤသည် turntable ကိုလည်းပုဂ္ဂလိကနားထောင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ headphone jack ပါဝင်ပါသည်။ ဒီ feature ကျိန်းသေတစ်ဦးတည်းတချို့တိတ်ဆိတ်အချိန်ပိုနှစ်သက်သောသူတို့အတှကျအကြိုးနှင့်ကမ္ဘာထံမှထွက်ဇုန်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစကိုသင်အလိုရှိကြသည်တွင်မဆို additonal စပီကာတစ်ခု RCA ကို output ပါရှိသည်။ ဒါဟာအများဆုံးဗီနိုင်းကစားခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာသုံးကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းမှာကစားနိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပပေါ်အနက်ရောင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းအပေါ်အဝါရောင်ကမှအလွန်ကြော့ Vibe ချွတ်ပေးပါဘူး။ ထို့အပွငျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စပြုပါလှပါတယ်။ ဒီ model ပဲအကောင်းကြည့်ဒါပေမယ့်လည်းကောင်းသောအသံမပေးပါဘူး။ က platform ပေါ်တွင်အနည်းငယ်သာ wobbles ရှိစေခြင်းငှါပေမဲ့လည်းသူက built-in စပီကာတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားနှင့်အကောင်းဆုံးအသံ perfomance များအတွက်သစ်သားဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူသျောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤပုံစံအဘယ်သူမျှမလုဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမော်ဒယ် $ 89,95 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ပလက်ဖောင်းပေါ် Little က wobbles ။
E-mail ကို: 800000@b.qq.com